Veto yeGoogle yeHuawei inodonha tekinoroji masheya | Ehupfumi Zvemari
Mhedzisiro yesarudzo yeGoogle yekuputsa hukama hwayo neChina Chinese trademark Huawei yakonzera kunetseka kukuru pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Tichifunga nezve kukanganisa kunoitwa neichi chiyero pamisika yemari. Parizvino, ese tekinoroji tsika dzakadzikira zvakanyanya mumatengesi epasi rese. With kudonha kwakanyanya uye kuti mune dzimwe nguva vanga vakakwira kupfuura 5%.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Huawei yakaedza kudzikamisa misika yezvemari nekutaura muchirevo chayo kuti "icharamba ichipa zvidziviriro zvekuchengeteka kumamodeli aripo echiratidzo ichi, zvese mumafomati emafoni uye mumapiritsi." Kunyangwe isina kunge iine chinozorodza mhedzisiro inogona kutarisirwa mumisika yemari. Kudyara kusahadzika mukati meyese tekinoroji chikamu icho akarangwa zvakaomarara uye uko kutengesa kwakaiswa nekristaro yakajeka pakutenga.
Mune yakasarudzika indekisi yemarudzi equity, iyo Ibex 35, kuchengetedzeka kweaya maitiro hakuna kunyorwa. Asi ivo vanga vari ivo chaivo vanobatana nehunyanzvi hutsva hwakanyanya kurangwa pakutanga kwevhiki. Kwakatungamirwa na Indra kuti zvishoma zvinopfuura 5% zvasara mukuyera kwemutengo wayo. Nepo varimi vadiki nepakati vatarisiri vakatarisa kune echinyakare tsika dzekupotera mune dzino chaidzo nguva. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
1 Huawei anorema pane kukosha kwechikamu
2 Chii chingaitwe nevarimi?
3 Sarudza mamwe masheya ezvikamu
4 Mirira kudzoka kwemazororo
5 Mitengo inogona kugadzikana
6 Chengetedza zvinzvimbo pamusika wemasheya
Huawei anorema pane kukosha kwechikamu
Sarudzo yakaitwa neGoogle yakatungamira mukudzikira kuve kwakajairika mumatura ese ari muchikamu chehunyanzvi. Pasina kana chakasarudzika uye muzviitiko zvakawanda kuderera mune imwe yenguva dzakaipisisa dzekutengesa dzegore. Imomo iyo tekinoroji indekisi yeUnited States, iyo Nasdaq yasara yakatenderedza 2,50%, ndichiri muno muSpain, iyo Ibex 35 yadonhedza pamusoro pazana chete muzana. Mukufungidzira izvo zvinogona kuitika mukati mevhiki rese, rinozogadziriswa nenhau idzi dzakakodzera izvo zvakatungamira kuVoo yeGoogle yeHuawei.
Mhedzisiro yesarudzo iyi yapfuura misika yemari ye China neUnited States. Kusvika padanho rekuti ivo vakanganisa ese tekinoroji tsika mune rese repasi. Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, mari yaenda kune mamwe matunhu anodzivirira uye akadzikama. Semuenzaniso, magetsi nemakambani akabatana nechikafu. Mupfungwa iyi, zvakafanira kuratidza basa remakambani seEndesa, ayo mune yakashata misika yemusika akanzwisisa kutenderedza 0,20%. Mune yakajeka nzira yekudyara iyo vatengesi vakatora kuchengetedza capital yavo inowanikwa mumusika wemasheya.
Takatarisana nemamiriro ezvinhu aya anoratidzwa nehunyanzvi hwehunyanzvi mumisika dzese dzepasirese, zvakanakisa zvinogona kuitwa nevashambadziri vadiki nepakati ndisipo pane izvi zvirevo mukudyara. Zvirinani munguva pfupi uye kunyangwe kuona kuti shanduko yayo ichave sei kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti kusagadzikana kunoratidzwa nemusika uyu wemari kuri kutaurwa kwazvo parizvino. Inobatsira kwazvo pakutengesa mashandiro nekuda kwemusiyano wepamusoro pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi. Kutora mukana weaya mafambiro mumisika yequity nekukurumidza.
Nepo kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iyo tekinoroji chikamu chimwe chezvinhu zvine njodzi mukuita kunoitwa nevatengesi vevatengesi. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete ichocho siya ma euro mazhinji munzira. Ehezve, haisi yakasununguka musika yemusika wemari kuti iiswe mari panguva ino chaiyo. Uye zvakatonyanya kukudziridza yakagadzika misika yemusika wepakati nepakati, izvo ndizvo zvinangwa zvikuru zvevachengeti vanochengetedza zvakanyanya. Ivo vane mamwe maitiro ayo ari nani zvakanyanya kukodzera kune yavo yekudyara chimiro.
Sarudza mamwe masheya ezvikamu
Tichifunga mamiriro akaunzwa nehunyanzvi hwezvitoro svondo rino, hapana mubvunzo kuti imwe yenzira dzakanakisa dzekudyara ndeyekutarisa zvimwe zvikamu zvisina kunetsana. Kwamunogona kutora mukana we spike kana kubhowa yeayo makuru epasi rese equices indices. Iko kunyangwe mikana chaiyo yebhizinesi inogona kubuda izvo zvinofanirwa kutorwa mukana nevechidiki uye vepakati varimi. Kunyangwe nehungwaru hukuru zvisati zvaitika zvinogona kuitika mumasaga kubva panguva dzino chaidzo.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hunhu hwetekinoroji chikamu kune imwe nhanho kuwedzererwa. Mupfungwa, kuti vakaona kuwedzera kwakasimba mumitengo yavo mumakore achangopfuura. Kusvika padanho rekuti vazhinji vavo vari muzvinzvimbo zvenguva dzese-dzakakwirira. Chokwadi ichi, nezve veto yeGoogle yeHuawei, inogona kunge iri yekunyepedzera yekutanga kugadzirisa mumisika yemari. Kunyangwe zvisingazivikanwe kumatanho aya mafambiro makuru anogona kutora anoumbwa mazuva ano.
Mirira kudzoka kwemazororo
Kana paine chikonzero chero chipi zvacho iwe uchida kuve wakamisikidzwa mune imwe yehunhu hwetekinoroji chikamu, zano rakanakisa panguva ino kumirira kudzoka kubva kuzororo rakamirirwa kwenguva refu yezhizha. Pamazuva iwayo kare zvichazozivikanwa kuti mhedzisiro chaiyo yanga iri yei yeichi chakakosha chiyero mune zvigadzirwa zvehunyanzvi. Zvekuti nenzira iyi, vashoma nevepakati varimari vanogona kusarudza kuti vapinde munzvimbo dzemakambani aya kana kana, pane kudaro, zvichiri nani kusavapo pazvinzvimbo izvi. Asi nguva dzose kubva kune inofungidzirwa nzira iyo inoteerera kune zvakajairika mamiriro eepasi rose equity misika.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti chikamu chehunyanzvi hachisi chidimbu chakanyanya kupa chakakwirira Zvikwereti kune vagovana. Kana zvisiri, pane kudaro, iwo mubhadharo uri nani parinogumira sezvo zvisingatombo pfuure 3% mune akanakisa kesi. Ndokureva, iwo haasi maitiro ekuchengetedza, asi kuti vaite mari dzekufungidzira uye munguva dzinokurumidza kwazvo. Kunyangwe mukufamba kwakasimudzwa mune imwecheteyo yekutengesa chikamu nekuda kwekusasimba kusimba mukugadziriswa kwemitengo yavo. Ichi chiitiko icho pasina mubvunzo chichafanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi nekupfuura kumwe kufunga muhurongwa hwekudyara.
Mitengo inogona kugadzikana
Munguva pfupi, ichokwadi kuti hunhu hwetekinoroji chikamu hunogona kugadzikana. Asi chakakosha ndicho chinogona kuitika zvinotevera. Ndokunge, kutanga svondo rinouya uye zvichienderana nezvimwe zvinoshanduka, senge mhedzisiro yesarudzo ye sarudzo dzeEuropean. Ehezve, hazvizove sarudzo iri nyore kutora kubva ikozvino zvichienda uye uko kwakawanda kukanganisa kunogona kuitwa muhurongwa hunogadziridzwa. Chinhu chinogona kuitika kwauri mazuva ano neakawanda frequency uye izvo zvinogona kutungamira kune asingadiwe mamiriro ako ekudyara zvido.
Mune ino nharaunda, zvichave zvakasiyana zvakanyanya kana ako masimendi akatarisana nenguva pfupi kana kana zvichipesana yakanangana nepakati nepakati. Nekuti hapana mubvunzo kuti ivo vachazoda kurapwa kwakasiyana muchirongwa chauri kuzoita kubva zvino zvichienda mberi. Mune mamwe mazwi, yako imba yekufambisa haizove yakanyanya kukwirira nekuda kweakasarudzika mamiriro emamiriro mune epasi rose misika yequity. Nezvo izvo njodzi dzakanyanya kukura uye izvo zvinogona kukupa kiyi nezve izvo zvaunofanirwa kuita kana kwete kubva ikozvino.
Chengetedza zvinzvimbo pamusika wemasheya
Muchidimbu, chiitiko chitsva chinobuda kune vashoma uye vepakati varimi uye kuti ivo vanofanirwa kutarisana navo panguva ye kuvaka yako inotevera yekudyara portfolio. Mune zvimwe zviitiko, kushandura hunhu uye mune vamwe kungo shandura chete zvimwe zvekutengesa zvemusika wemasheya. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire mune inoshanda zvakanyanya uye pamusoro pese nzira inobatsira yekudzivirira zvaunofarira. Zvakare nekutarisisa kune zvese zvinogona kuitika muhafu yepiri yegore. Neese akasiyana anokwanisa kusimuka kubva muchiitiko ichi chinomuka muchikamu chino chegore.
Iko kumagumo kuri nezve izvo iwe zvaunogona kunatsiridza iyo bhalansi yeako account yekuchengetedza mune yega yega yekutengesa gore. Kuziva nguva dzese kuti zvinhu hazvingagare zvichinyatsoita sezvaunoda iwe. Chinhu chinodikanwa kubva zvino zvichienda mberi kubva hazvo kudyara mumisika yemari hakuzove nyore kuisa mukuita. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kukanganisa zvisingaite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Veto yeGoogle yeHuawei inodonha tech masheya